ကြေးအိုးချက်စားမယ်/Let’s cook and eat Kyay-oh | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ကွမ်းရွက်နဲ့ချက်တဲ့ ဂဏန်းအစပ်/Spicy crab cooked with betel leave(piper betle)
ပဲကပ်ကြော်/Fried chick peas in glutin rice dough →
အဲဒီနေ့တုန်းကအိမ်က သားနေမကောင်းလို့ ကြေးအိုးလုပ်စားဖြစ်တယ်။ လူကြီးတွေ လဲကြိုက်ကြတယ်လေ။အမြန်လုပ်တာဆိုတော့ ငုံးဥမထဲ့တော့ဘူး၊ နေမကောင်းရင်လဲ ငုံးဥစားလွန်းရင် အန်တယ်ကြားဖူးလို့။အိသက်အဒေါ်အငယ်ဆုံးက စမ်းချောင်းပဒုံမာကွင်းနောက်မှာ ရွှေသဇင် ဆိုပြီးဆိုင်ဖွင့်ဖူးတယ်။ London ဒုတိယအကြိမ်ပြန် လာခါနီး အဲဒီဆိုင်ကိုဦးစီးရတဲ့ အကိုတဝမ်းကွဲ ကိုကြီးထွန်းကို နည်းမေးခဲ့ရတာ။ ကြိုက်လွန်းလို့။
That day, my son wasn’t feeling well was the reason I made this Kyay-Oh for him and we like it as well. I didn’t put quail eggs as I didn’t plan to cook and heard that over consuming quail eggs might cause throwing up when you are sick. My youngest aunty ownedarestaurant called Shwe-tha-zin behind the Pa-done-mar open space. Before I came back to London second time, I asked my cousin brother who runs that restaurant about the recipe as I like it so much.
ပါဝင်ပစ္စည်းများ( လူ၎ယောက်စာ)/-Contents (4 servings)
– ကြာဇံအထုတ်ကြီးတစ်ထုပ်/-1 bag of rice noodles
-ဝက်ရိုး၃ချောင်း/-3 pork ribs
-ဝက်သားဓနုတ်ပေါက် ၅၀၀ ဂရမ်/-minced pork 500g
-အူ ၊ အသဲ ( ကြိုက်ရင်) ၂၀၀ ဂရမ် စီ/-pig intestine, pig liver (if you like it)
-သကြား ၄ဇွန်း ( စားပွဲတင်)/-4 table spoons of sugar
-ကော်မှုန့် ၂ဇွန်း( စပတ)/-2 table spoons of corn starch
-ပဲငံပြာရေအကြည် ၁ဇွန်း ( စပတ)/-clear soy sauce 1 table soon
-ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်/-sizzled garlic soaked with cooking oil
-ကြက်ဥ ၁လုံး/-1 egg
– five spice powder တရုတ်မဆလာနဲနဲ၊ ငရုတ်ကောင်း ၊ ဆား၊ သကြား အနဲငယ်
Five spice powder, Chinese Malasa, Grinded pepper, salt andabit of sugar
– choi sum အရွက်( ကြေးအိုးထဲ ထဲ့တဲ့ မုန့်ညင်းရိုးရှည်အရွက်)
/-Choy Sum leaves
-ကွိဆိုင်ကွဆိုင် ( ကြက်သွန်မြိတ်)/-Spring onion
ဝက်ရိုးကို ဆား၊ကြက်သားမှုန့်၊ငရုတ်ကောင်း၊သကြားတို့နဲ့ ပြုတ်ထားပါ
Boil the pork ribs with salt, chicken powder, pepper and sugar.
boil the intestine on its own.
ဝက်သားဓနုတ်ပေါက် ၅၀၀ ဂရမ် ကိုf ive spice powder နဲနဲ ၊ ငရုတ်ကောင်း ၊ သကြား ၂ဇွန်း၊ ကော်မှုန့် ၂ဇွန်း၊ ပဲငံပြာရေအကြည် ၁ဇွန်း၊ ကြက်ဥ ၁လုံး၊ ဆား၊ သကြား အနဲငယ် ထဲ့ပြီနယ်ထားပါ။
Mix thoroughly the pork mince 500g with five spice powder, pepper,2sugar spoon,2spoonful of corn starch, 1 spoon of clear soy sauce, 1 egg and salt.
Soak the rice noodle.
အသားလုံးလေးတွေကိုကြေးအိုးလုပ်မဲ့ အိုးလေးထဲမှာ တပွဲစာ ဝက်ရိုးပြုတ်ရေနဲ့ ပြုတ်ပါ။( လူများများတပြိုင်တည်းစားချင်ရင် အသားလုံးလေးတွေကြိုပြုတ်ထားပေါ့နော်)
Boil the meat balls with the boiled water from pork ribs inaone serving bowl. ( boil more meat balls for immediate serving for more people)
အသားကျက်ရင်ပဲငံပြာရေအကြည် သုံး လေးစက် , ကြာဇံထဲ့ အရွက်ထဲ့ ပြီး အရွက်ကျက်ရင် ကြေးအိုးပန်းကန်ထဲကိုထဲ့ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ၊ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ် လေးဖြူး ပြုတ်ပြီးသားအူလေးတွေထဲ့ ( အိသက်ကသားသား ကြိုက်တဲ့ ငဖယ်လုံးလေးတွေပါထဲ့တယ်) ၊ငုံးဥကြိုက်ရင်ထဲ့ပေါ့နော်
-ရေနွေး ဇွန်း ၁၀ဇွန်း(စားပွဲတင်ဇွန်း )
-ပဲငံပြာရေ ၂ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း )
-အသားမှုန့် ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်ဇွန်း )
ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို မညက်တညက်ထောင်းထားပြီး ကျန်အရာများရောလိုက်ပါ။ ချဉ်စပ်မွှေး ငရုတ်သီးစိမ်းအချဉ်ရည်ရပါပြီ။
ကြေးအိုးချဉ်စပ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချဉ်ရည်ကို ကြေးအိုး ၁ပွဲစာကိုအချဉ် ၂ဇွန်း(စားပွဲတင်) ထဲ့မွှေလိုက်ရုံပါပဲ။
Once the meat balls is done, addafew drops of fish sauce, add the leaves into the noodles, then add the sizzled garlic, pepper, sprinkle spring onions and already boiled intestines intoaserving bowl. I also put some fish balls as my son likes it. Quail eggs can be added too. Now, the quick and easy but yummy Kyay-oh is ready to be served.
29 comments on “ကြေးအိုးချက်စားမယ်/Let’s cook and eat Kyay-oh”
06/03/2012 @ 6:46 am
thank u nyi ma lay 🙂
07/03/2012 @ 1:44 am
sis, I wanna try making kyae-o- se-chat….
can u share me the receipe if u know…thx 🙂
07/03/2012 @ 10:55 am
ကြေးအိုးပြုတ်တဲ့နည်းနဲ့တူတူပါပဲ၊ နောက်ဆုံးမှာပြုတ်ရေကိုစစ်ပြီး ပဲငံပြာရေ၃စက် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ၁ဇွန်း၊ ငရုတ်ကောင်း တို့နဲ့မွှေလိုက်ပြီးစားရုံပါပဲနော်။ အဆင်မပြေရင်ပြန်မေးပါနော်
13/03/2012 @ 9:55 pm
သူငယ်ချင်း၇ယ် နင့်၇ဲ့စေတနာကို အ၇မ်းလေးစားတယ်ဟာ။ကျေးဇူးပါနော်။
14/03/2012 @ 12:34 am
ချက်စားရတာအဆင်ပြေရင် ဝမ်းသာပါတယ်ဟာ 🙂
22/05/2012 @ 11:15 am
ဒေါ်အိသက်ရေ… သင်္ဘောပေါ်မှာ သွားရည်ယိုနေပြီ။ ဘယ်က စ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။
22/05/2012 @ 11:54 pm
09/06/2012 @ 8:50 am
စားချင်တယ် မ …….. ရွှေသဇင်မှာစားဖူးတယ်. မတို့အမျိုးမှန်းမသိခဲ့ဘူး. ခုတော့ ရုံးချိန်ကြီးမို့ မတင်ထားတာပဲစားလိုက်တယ်. sha lut
🙂 thank you naw
09/07/2012 @ 6:37 pm
စားချင်တာကြာပီ အခုမှပဲ ချက်နည်းလေးသိရတယ်ကျေးဇူးပဲအမရေ
24/07/2012 @ 3:58 am
Thanks for cook and eat Kyay-oh but can you explain me more details what is the five spice powder?Where I add chinese masala to the making of pork ball or making soup?pls reply me if you are feel free.
06/10/2012 @ 3:44 am
ကွဆိုင် မဟုတ်ဖူးထင်တယ် ကုဆိုင်ကိုသုံးတာ မဟုတ်လား ကုဆိုင်က spring onion မဟုတ်ဖူး chive အမျိုးအနွယ်ပဲ
06/10/2012 @ 12:26 pm
hote kae.akhaw mar lo htin tae , kyayy zuu naw 🙂
24/10/2012 @ 6:29 pm
Sis….kyay oo lote sarr chin tar kyar p. thank you sis. yummy. I always come to this page but first time i make comment here. This page is really helpful. thank you again sis Xxxxx
24/10/2012 @ 10:44 pm
thank you par sis yay , it make me happy reading your comment 🙂
14/11/2012 @ 4:26 pm
15/11/2012 @ 10:22 am
21/11/2012 @ 6:43 pm
have u seen shwe tg noodle that i post ko myo ko yay 🙂
23/11/2012 @ 6:06 am
thank u ma eithet.
20/01/2013 @ 10:44 am
hello , sis.
big big thanks for ur kyay oo
I try it at my home
it’s so yummy…
17/02/2013 @ 6:16 am
06/08/2013 @ 3:47 pm
Ko Naing Naing
17/08/2013 @ 3:34 pm
The best website about Burmese food I have ever seen. A perfect contribution.
Top rating from here.
17/08/2013 @ 9:45 pm
thanksalot for ur sweet comment.
07/11/2013 @ 4:21 pm
Tho this is my first time cooking “kyae oh”, the taste is really good, recipes is easy to be followed up, and ingredients are not very hard to be found in Coventry. Thanks So much for sharing.
08/01/2014 @ 8:32 am
ချက်တော့မစားဖြစ်ဘူး ကြည့်ရတာနဲ့ဗိုက်ဝသွားပြီ အရမ်းကောင်းမဲ့ပုံပဲနော်
08/01/2014 @ 11:43 am
thank you par cham myae lay yay 🙂
May Myint Myat Noe
19/03/2015 @ 3:39 am
ကြေးအိုးချက်စားချင်နေတာ ကြာပြီ၊ အခုမှ ချက်နည်းကို သိရတော့တယ်၊ ဒီနေ့တော့ ချက်စားပြီ ၊ ကျေးဇူးပါအမ
LeaveaReply to chitsu Cancel reply